Mootummaan TPLF gaaffii ilmaan oromoo kaasaniif deebii kolbaa itti kennuu qaba! – Welcome to bilisummaa
Mootummaan TPLF gaaffii ilmaan oromoo kaasaniif deebii kolbaa itti kennuu qaba!
bilisummaa May 17, 2014	Leave a comment
By Bantuu Turaa
Kan isin dhibu qabsoo waggaa 50 oromoon abbaa afaan isaa fi aadaa isaa ta’uuf deemsise kijiba itti makuun seenaa OPDO fakkeessuuf yaalan. Ni beeknaa bar hin dagannee woyta isaan sabboontota bakka ummanni walgahu hundatti daamanii qubee afaan oromoo barsiisan isaan tarkaanfii itti fudhatan. Hardha ammo seenaa oromoo abbaa afaan isaa akka ta’u nutu hojjate jedhanii miidiyaalee isaanitiin odeessan. Seena hattoonni seenaa hatan! Seenaa addaa dargii irratti hojjanne jedhanii kan ofii ol kaasun haasayan; fiilmii qabsoo isaanii hojjatan sabatti agarsiisan! Qabsaa’onni keenna dhagaan taankii dargii booji’an jedhan! Oduu irra darbanii ebalu qabsaayaan keenna xiyyaara dargii dhagaan samirratti haleelee kuffise jechuu qofa isaan hafe! Ammallee qabsoo Finfinneerratti oromoon dhiyeesse deebii kolbaa itti hin kennine! Qabsoo sabaa ni tuffatu! Qabsaa’aa ni kufa qabsoon itti fufa! Anis geerrarsa armaan gadii kanaaf isin affeere!
Ka’i ka’i ka’ii
Finfinnee fi Dirreellee numarraa muranii
Sabnillee fincillaan qawwemaan dhayanii
Oromiyaan biyyaa handhuurri finfinnee
Wanta diinni jedhe nu irraa fudhannee!
Diina wawween dhayii!
Diina mooyii galii
Amma lafaa kaanaa
Diinaan ni falminaa
Yaa saba Oromiyaa
Ani simaaf iyyaa!
Hidhannee ni kaanaa
Hunda nu roorrisaa
Seenaa keenna dhoksaa
Kan ofii ol kaasaa!
Yaa saba falmadhuu
Biyya kee dhuunfadhu!!!
Previous Gaazexaa Maqaa Islaamaatiin Kallattii Qabsoo keenyaa jijjiiruuf dhufe kana bituu dhiisuun shira Mootummaa kana haa fashaleessinu!!
Next Tokkummaan uummata Oromoo yoomiyyuu caalaa amma barbaachisaa fi murteessaa dha